दशैंको बोकाले धोका दिएपछि…. मुसिकोट जलुके गाउँका न्यौपाने परिवार अहिले सम्म दु:खी ! – ebaglung.com
२०७६ मंसिर ४, बुधबार ०९:१२	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७६ मंसिर ४ । गुल्मीको एक गाउँमा, कलाकार महजोडीको हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘दशैं’ को कथामा जस्तै दशैमा काट्न ठिक्क पारेको बोका हराएको र पछि कसले चोरी गरेको भन्ने वास्तविक घटना अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
दशै पछिको तिहार पर्व गएको पनि यतिका दिन बितिसक्दा समेत गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर ३ जलुके गाउँका टेकप्रसाद न्यौपाने परिवारले दशैंमा काट्न ठिक्क पारेको बोकाले धोका (हराए) दिएपछि वडा कार्यालय देखि प्रहरी सम्म उजुरी बाजुरी गर्नु परिरहे पनि बोका चोरी गर्ने ब्यक्ति पत्ता लाग्न नसकेको हो ।
टेकप्रसादका छोरा रामु न्यौपाने भन्छन –‘ माथी मैदान तिरबाट कार्तिक १६ गतेका दिन दशैमा काट्नका लागि १३ हजारमा बोका किनेर ल्याई गोठमा बाँधेका थियौं । किनेर ल्याएको तीनचार दिनपछि अष्टमीको विहान त्यस्तै १० बजेतिर काट्नका लागि खुकुरी उदाएर , पानी तताएर ठिक्क पारेर गोठबाट बोका फुकाएर आँगनमा ल्याऔं ।
त्यस पछि खुकुरी उचालेर छिन्न लागेको बेला बोका फुस्केर भाग्यो । हामी काटन लागेका चार पाँच जना बोकालाई पछ््याउदै तिलाराको बनतिर दुई तिन घण्टा सम्म खोज्न हिडियो । हामी भन्दा बोको धेरै अगाडी दौडेर कता भाग्यो–भाग्यो । हामीले भेटाउन नसकेपछि घर फर्केर दशै जस्तो चाडको बेला मासु खानु पर्नेमा आलु भुटेर खान खाईयो । ’
करिव एक महिना पछि पोल खुल्यो
न्यौपानेको घरबाट बोका बेपत्ता भएको कुरा एककान दुईकान मैदान हुँदै गए पछि छिमेककी एक महिलाले करिव एक महिना पछि नजिकैको छिमेकी पेंगा गाउँका एक जना बिश्वकर्मा थरका ब्यक्तिले न्यौपानेले काट्न लागेकै दिन बोका डोराउँदै हिडेको भनेर न्यौपाने परिवारलाई भनिन ।
त्यस पछि ती बिश्वकर्मा थरका ब्यक्ति वडा कार्यालय देखि प्रहरीको सोधपुछ छानबिनको दायरामा धाउनु प-यो । मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर ३ का वडाध्यक्ष कर्णध्वज जिसी भन्छन–‘ बोका हराएको धेरै दिन सम्म तिनै बिकले चोरेर दशै मनाए भन्ने आरोप न्यौपाने परिवारले लगाई राखेका छन ।
हामीले प्रहरी समेत लगाएर सोधपुछ छानिविन गरिरहेका छौं । आरोपित ब्यक्ति अझै पनि हाम्रो अनुसन्धान कै दायरामा छन , उनले अस्वीकार गरेपछि अझै टुंगो लागेको छैन । स्थानिय भद्रभलाद्का अनुसार पछि ती महिलाले पनि कुरा चपाउँदै आएकी छन ।
कहाँबाट आयो त्यस दिन बोकाको मासु ?
ती बिकले भने मैले हुँदै होईन भन्ने अडान लिई रहेको बुझिएको छ । न्यौपाने परिवार संगै बोका खोज्न जंगल देखि घर घरमा हिडेका छिमेकी सुनिल न्यौपाने भन्छन –‘हामी बोका पछ्याउँदै साँझ अबेर सम्म खोज्दा पनि फेला नपरेपछि दशैमा निरास भई बस्नु परेको थियो ।’
न्यौपानेका अनुसार सोही दिन पेगा कै अधिकारीचौर भन्ने टोलमा एउटा बोका काटिएको थियो । त्यहाँबाट आरोपित बिकले तिन चार किलो मासु लिएको त्यस टोलवासीले बताएको न्यौपाने परिवारको भनाई छ । स्थानियका अनुसार त्यस अघि सम्मका दशैमा त्यस टोलका बिश्वकर्मा परिवारले अरु समुदाय संग मिलेर खसी बोकाको मासुमा कमै मात्रमा सहभागी हुन्थे ।
आरोपितले दशैमा अरु समुदाय संग मिलेर खसी बोकाको मासु ल्याएको बताए पछि उनी माथी आशंका गर्नु पर्ने आधार भएको त्यहाँका कतिपय समाज सेवीको भनाई छ । अर्को कुरा सुरुको सोधाईमा आरोपित बिकले आफु कहाँ बाख्रा नै नभएको बताएका थिए ।
पछि प्रहरी संग ती महिलाले उनले बाख्रो डोराए कै थिए भनेर भने पछि आरोपित बिकले खै जाँड रक्सी पिएको थिएँ , खै कसको बाख्रा डोराएँ थाहै भएन भनेर भनेका छन । उनले उल्टै न्यौपाने परिवारलाई मेरो मानहानी भयो भन्दै वडा कार्यालयमा उजुरी समेत दिएर धम्काएको बुझीएको छ ।
आरोपित बिकको नाम वडा कार्यालयले खुलाउन चाहेको छैन । न्यौपाने परिवारले आफु सोझो र गरिव परिवारको भएकाले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै सञ्चार माध्यम मार्फत जनप्रतिनिधी र प्रहरी प्रशासनको माथील्लो निकायको ध्यानकृष्ट गराएका छन ।